Coutinho “Kama qoomameynayo ka tagista garoonka Anfield.” | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Coutinho “Kama qoomameynayo ka tagista garoonka Anfield.”
Posted by: Mahad Mohamed 13 days ago
Himilo – Philippe Coutinho ayaa sheegay in aysan layaab ku aheyn in uu arko Liverpool oo duuleysa ama sameynaysa guulo waaweyn xilli cayaareedkan inkasta oo uu ku adkeystay in uusan ka qoomameynayn ka tagista Anfield.
Reds ayaa la filayay inay ku adkaan doonto helitaanka beddalka cayaaryahanka reer Brazil markii uu u dhaqaaqay Barcelona bishii Janaayo sannadkii 2018-ka kaddib afar sanno oo macno badan uu ka sameeyay horyaalka Ingiriiska.
Laacibka 27 jirka ah ayaa ku guuldareystay in uu boos ka xaqiijiyo shaxda koowaad ee Barcelona isaga oo heshiis ammaah ah lagu siiyay Bayern Munich oo si joogta ah ula wareegi karta dhammaadka xilli cayaareedkan.
“Liverpool way duuleysaa, layaab iguma aha, horay ayaan u aragnay sannadkii hore markii ay ku guuleysteen Champions League,” ayuu yiri Philippe Coutinho.
Waxa uu intaa raaciyay “Waan ku farraxsanahay, maxaa yeelay waxaan halkaasi ku leeyahay saaxiibbo badan.”
Bayern ayaa hadda hoggaamineysa horyaalka Bundesliga iyada oo isku diyaarinaysa kulanka wareegga 16-ka ay kaga hor imaanayso kooxda Chelsea bishan.
Previous: Aljeeriya: Haweenay katirsan safaaradda Talyaaniga oo dacwad ka gudbisay diiq
Next: Ruushka: Bishii Janaayo ee sannadkan ayaa noqotay tan ugu mugdiga badan
Roma oo heshiisyo rasmi ah ku dooneysa Smalling iyo Mkhitaryan
Gerrard “Diyaar uma ahi shaqada Liverpool.”
Inter Milan oo u dhaqaaqi karta Anthony Martial